Ama-headphone Wireless Jabra: ngebuhle nebubi
Le nkampani, othiwa Jabra, usuthandwa isikhathi eside. It umise ngokwaso njengoba producer phezulu, abadayisa ezimakethe ngamathuluzi ezinhle ngempela. On the brand waphawula abathengi abaningi. Into wukuthi amamodeli ethulwa mahle njalo ukusetshenziswa ekhaya kanye nemidlalo. Lesi sihloko sizosisiza sihlole ama-headphone ezinhle Jabra (okungenantambo) kamakhi, futhi uchaze izinzuzo zabo zangempela kanye nobubi obuthile. Ukuze wenze Uhlolojikelele ephelele kakhulu ngamunye wabo, athathwa ngqo izibuyekezo zamakhasimende, ochwepheshe, futhi wafundelwa, futhi ukuthandwa isilinganiso kahle izindleko futhi izinga.
Umkhiqizi Halo Fusion imodeli kwahlomisela design ezinhle yesimanje ezokwenza ivumelane wonke umuntu. "Ibhande," futhi kuhlangana uhlobo ukusonga, kubukeka egqamile ngezindlela ezintsha futhi uyakwazi ukuheha eziningi abathengi. Sheathing wathola velvet umphumela. Yingakho-headphone Jabra kuyinto elula ngempela futhi ukhululekile "amanga" ekhanda umthengi. Uma kwenzeka ukuthi idivayisi akafuni ukugqoka Intamo esimweni ingasebenzi, kungashiwo ukubeka kalula ephaketheni.
Kulaba minuses abathengi bathi nokuntengantenga ukuze umswakama namanzi. Ngakho-ke ungasebenzisi idivayisi emvuleni, ngaphandle kwalokho uzoba ukuyiguqula.
Ziyini izinzuzo? kubhekelwe "I-Bluetooth" earphone we Jabra ingasebenza ngisho nalapho ibanga emthonjeni umsindo ku-5 amamitha. Ngokuba esigabeni intengo idivayisi has play elihle ngiziqhayise bonkhe batsengi. Ibhethri ibuthakathaka. Ngaphandle kokumisa headphones wayesebenza amahora angu-5. Okulandelayo, udinga lingatshajwa.
Jabra Ezemidlalo Pulse
Jabra Ezemidlalo-headphone wohlu umkhiqizi womsebenzi ezemidlalo kukhona "amaphayona." Uma unganelisekile 'esinezimpondo ", ukuthi angahlala zisuswe nse umlomo wombhobho. Ama-headphone anemisila izinkinobho ekhethekile zikuvumela ukushintsha ivolumu kanye nokugcinwa kwemisebenzi nokudlala. Umklamo ngempela ezithakazelisayo, ngakho-ke, ngokushesha Ubamba iso futhi ikhanga abathengi.
Phakathi amaphutha kungenziwa kuphawulwe ukuthi idivayisi ngezinye izikhathi evele eyeka ukuthola uphawu. Ikakhulukazi le nkinga kubhebhezelwa esikhathini ebusika, uma umsebenzisi ukhetha ukugqoka izingubo obukhulu.
Inzuzo abathengi bathi izinkinobho asebenza kahle. Amnandi uthinte bese uxhumana nabo ngazo zonke izindlela. Ungasebenzisa amakhi ekhethekile, obhekene kwethulwa izicelo ezemidlalo uma uthanda. Jabra-headphone ziyakwazi futhi lokhu, yini edonsela abathengi. Umhlangano eyenziwa ezingeni engcono.
Lezi-headphone zihlukile ukufuneka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, banayo ukusebenza engcono kanye nomklamo. Ibhethri abanamandla abakwazi ukuphila ngaphandle lingatshajwa samahora angu-13. Lokhu ngeke kodwa jabulani. Ngaphezu kwalokho, ke kuvunyelwe ukuba ukushaja kusuka kunoma iyiphi idivayisi ukuthi unesikhathi echwebeni USB namandla. Ngenxa yalesi kufanelekile kokubili ikhompyutha yakho bese smartphone yakho.
Kulaba minuses kungenziwa waphawula ukuthi ngezinye izikhathi ejabulisa ukwahlukanisa - kungaba "ifohle" mgwaqo umsindo noma kwezinye izindawo umatasa.
Inzuzo abathengi bathi lezi-headphone Jabra akwazi ukunikeza induduzo ikhasimende esiphezulu. Ngaphezu kwalokho, bababukela ngobumnene lisibekele ikhanda. On the ikhebuli ku Dynamics izinkinobho kungatholakala. Kukhona futhi kuyinto inkinobho obhekene inkomba umbala. Ekhulumela headset, abathengi waphawula kunezinzuzo eziningana: akukho msindo, futhi ucingo ungezwa kahle.
Cabanga kudivayisi okungenantambo okulandelayo kusukela brand Jabra. Ama-headphone (-Bluetooth module - isimiso esiyisisekelo yokuxhumana, kukhona ikhebula) ahlinzekwa ngumkhiqizi, njengoba idivayisi ekhaya. Emgwaqweni kanye ngezinye izindlela ngaphandle umculo evamile, lo mkhiqizo kufanele kugwenywe. Umkhiqizi emakethe eletha ezintathu izinhlobo imibala: okuluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama abomvu. Ngakho-ke, umthengi angakhetha ngokubona kwayo. Kwesiyingi idivayisi camera nge material ekhethekile zokuzivikela, Jabra-headphone benziwa epulasitiki kanye izinkomishi indlebe kukhona eco-lesikhumba Upholstery.
Phakathi amaphutha Kumele kuqashelwe ukuthi awukwazi kanyekanye ukuxhumana ngedivayisi phezu module wireless ixhunywe kwesinye ikhebula.
Abathengi aveze izinzuzo ezilandelayo: Ibhethri uyakwazi eside emhlabeni 9 amahora ngecala olulodwa ikumodi asebenzayo. Uma usebenzisa enamandla izinga isofthiwe umsindo ngangokunokwenzeka, kodwa ngisho nalapho exhunywe kwi-smartphone, yena ayenzi umsebenzisi lihawukele mayelana kokuthenga. Umklamo ukhululekile futhi fixed kahle ekhanda.
Kugcine kuhla lwethu-headphone futhi abe uhlobo sporty. Basuke sizikhandle ogibele izindlebe, futhi sisasebenza ngenguqulo yakamuva module engenantambo. Ngaphezu kwalokho, lokhu umakhi imodeli ifakwe Ukuvikelwa okukhethekile kusuka umswakama, kungenzeka ukushaja okusheshayo nokunye.
Kulaba minuses abathengi bathi ama-headphone (imibhalo) kufanele asebenze amahora ama-4, nakuba eqinisweni lesi silinganiso akuvamile idlula imizuzu 200. Uxhumano iphula ngempela kalula. Ngisho nokuba nobuhlobo obuseduze umthombo umsindo, ungabona zokuxhumana emfushane iphazamisekile.
Advantage Kumele kuqashelwe umsindo ezinhle njengoba lapho ukulalela umculo, futhi ingxoxo ucingo.
Ngokuvamile, inkampani ye amakhasimende happy onobuhle ezinhle ezisebenza isikhathi eside, abe umsindo omkhulu. Nokho, kodwa nayo inazo kahle. I sina iningi labo - uxhumano ezimbi ngenxa kwezinye tinkhulumo. Lokhu ukuntula kubalulekile ngempela futhi kudingeka basebenzele ukuba babe kuso. Nokho, abathengi pluses eziningi, ngakho-headphones lokhu umakhi bayindlala ezinhle.
Unesimila ebuchosheni - kuyini? Izimpawu nasekwelashweni kwezifo kungakephuzi